लकडाउन डायरी (पाठक मत) – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
लकडाउन डायरी (पाठक मत)
२०७६ चैत्र २५, मंगलवार २०:४१ गते
in पाठक पत्र
कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रण को लागि लकडाउन सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । किनकि चीनले यही माध्यमबाट कोभिड १९ लाई जित्न सक्यो। लकडाउनले मानिसको जीवन त जोगाउला तर आर्थिक जीवन के होला ?
ग्रामीण इलाकामा बस्ने मानिसहरू कृषिमा नै बढी निर्भर हुने हँदा तत्कालै खासै असर त नगर्ला तर लक लडाउन लामो अवधिसम्म रह्यो भने किसानलाई खेती लगाउन आवश्यक पर्ने मलखाद र बीउबिजनको जोहो कसरी होला ?
सहरमा धनी र सुकिला मुकिलाको मात्रै बसोबास हुँदैन, यहाँ त गरिब र सुकुम्बासीहरुसमेत दैनिक रोजगारीको लागि आएका हुन्छन् । उद्योग कलकारखानाहरु, होटेल रेष्टुराँहरु लामो समय बन्द रहेमा रोजगारीमा व्यापक कटौती भई दैनिक ज्यालादारी एवं मध्यम वर्गलाई ठूलो असर गर्ने छ।
बिहान बेलुकी हातमुख जोर्न नै समस्या हुने देखिन्छ । पन्ध्र दिनको लकडाउनमा त राहत लिन लामो लामो लाइन छ । हुन त यो समस्या नेपालको मात्र रहेन, आज विश्व नै कोभिड १९ सँग डगमगाएको छ। विकसित देशहरुकोसमेत यो रोगसँग लड्ने तयारी देखिएन। युरोप र अमेरिकामा नै यसको सङ्क्रमण व्यापक फैलिएको र निर्दोष नागरिकहरुको ज्यान लिइरहेको छ । केही थान माक्स, पिपिई र भेन्टिलेटरको लागि हारगुहार गरिरहेछन् ।
अमेरिका भारतसँग औषधि मागिरहेको छ । सबै देशहरूलाई यो महामारीमा आफ्नै नागरिक जोगाउनु छ । यो विपत्तिमा मेरो देश नेपालले पनि नागरिकको जीवन र देशको अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन सकोस्, गरिब र दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिकलाई दुई छाक खाने व्यवस्था मिलाउन सकोस् । जय मातृभूमि
-शैलेन्द्रराज पौडेल, भरतपुर
नगर प्रहरी र फुटपाथ व्यवसायीबीच लुकामारी (सम्पादकलाई चिठी)